Interview with Paras Khadka | विश्वकप खेलेर आएपछि के भन्छन् पारस खड्का ?
Wednesday, 17 October 2018 08:42 am, Nepal
मेचीकाली : 2014-03-22 13:40:32
-पारस खडका कप्तान
बंगलादेशमा ट्वान्टी–२० विश्वकपको समूह चरण खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली शुक्रबार स्वदेश फर्किएको छ। पहिलोपल्ट विश्वकप खेलेको टोलीले पहिलो खेलमै हङकङमाथि ८० रनको प्रभावशाली जित पाएको थियो। दोस्रो खेलमा टेस्ट खेल्ने आयोजक बंगलादेशलाई नतिजा सुम्पनुअघि नजिकबाट चुनौती दिँदै आएको नेपालले अन्तिम खेलमा बिहीबार एकदिवसीय मान्यताप्राप्त अफगानिस्तानलाई ९ रनले हरायो। टोलीको सफलतामा सम्पूर्ण देश खुसी मनाइरहेको बेला राष्ट्रिय कप्तान पारस खड्कासँग नागरिक दैनिकका प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको संक्षेप:
नेपालको विश्वकप सहभागितालाई कसरी सम्झनुहुन्छ?
– धेरै पहिलादेखि विश्वकप खेल्ने सपना देखेका थियांै। छनोट भएपछि क्रिकेटको माहोल बन्न थाल्यो। हाम्रो प्रयास सधैं राम्रो खेल्ने नै हुन्छ। पछिल्लो ७–१० दिन हामीले बंगलादेशमा एउटा टिमका रूपमा खेल्यौं। यसअघि हामीले सायद यति राम्रो क्रिकेट कहिल्यै खेलेनौं होला। टोलीका रूपमा प्रदर्शन गर्दा नतिजा आउने फेरि प्रमाणित भएको छ। खेलमा नतिजा नै हेरिन्छ। यसपटक नतिजामात्र हेरिएन। जसरी खेल्यौं त्यो महŒवपूर्ण थियो। न्युजिल्यान्डमा एकदिवसीय विश्वकप छनोटपछि धेरैलाई अब नेपालले राम्रो खेल्न सक्दैन भन्ने लागेको थियो। तर, म यसलाई एउटा सुरुआतको रूपमा मान्छु। यो अन्त्य होइनमात्र सुरुआत हो।
केही अघिसम्म नेपाललाई ट्वान्टी–२० खेल्ने टोली मानिँदैन थियो। विश्व ट्वान्टी–२० पछाडि यसलाई कसरी लिनुपर्छ?
– अब त हामी ट्वान्टी–२० को स्पेसलिस्ट भइसक्यौं।
यहाँसम्म पुग्नुका आधार?
– अभ्यास नै हो। पहिलो हामी ४ घन्टा अभ्यास गर्थ्यौं, अहिले ८ घन्टा अभ्यास गर्छौं। तरिकाले अभ्यास गर्छौं। मोर्डन टेक्निक ट्राइ गछार्ंै। अहिले हामीसँग प्रशिक्षकसँगै फजियो, एनालिस्ट हुनुहुन्छ। पहिला थिएन। सबैले आ आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत गरेका छौं।
बंगालदेशको नतिजालाई कसरी हेर्नुपर्छ?
– सबैको इच्छाअनुरुपको सफलता भनौं। यति धेरैले माया गर्नु हुन्छ, सायद सारा नेपालीले क्रिकेट हेरिरहनु भएको थियो। मैले सुनेको, फोटोमा हेरेको थिएँ, बसन्तपुर, पाटन मन्दिरलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा सबैले क्रिकेट हेरिरहनुभएको थियो। क्रिकेटमा नेपालले जित्यो भन्दा पनि क्रिकेट नेपालको पहिचान बनिसकेको छ। हामी क्रिकेट खेल्ने एउटा राष्ट्र हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। हरेक खेलाडीमा जिम्मेवारी छ। हामीले बुझेका छौं, क्रिकेट खेलमात्र नभई अलि बढी नै भइसकेको छ। देशलाई बाँध्न सक्ने एउटा माध्यम हो। सबै जना खुसी हुनुभएको छ। एउटै कारणले एकैपटक यति धेरै खुसी नेपाली यसअघि हुनुभएन होला।
विमानस्थल ओर्लनुअघि के सोच्नुभयो, के पाउनुभयो?
– समर्थकको उपस्थितिको आशा सधैं जस्तो गरेको थिएँ। अब त बानी परिसकेको छ। तर हामीले आशा गरेभन्दा बढी माया र आशीर्वाद पाएका छौं। हाम्रा लागि जीवनका अविस्मरणीय क्षण यिनै हुन्।
अफगानिस्तानसँगको जितलाई कसरी लिनुभएको छ?
– अन्य खेल जित्दा जस्तै। खासै अन्तर थिएन। तर अफगानिस्तान राम्रो टोली हो। त्यो टोलीलाई हराउन सक्दा स्वाभाविक रूपमा खुसी लाग्छ। अफगानिस्तानलाई हराउन झन्डै १० वर्ष कुर्नुपर्योा। पछिल्लोपटक हराउँदा पनि म खेलेको थिएँ। त्यसपछि विभिन्न परिस्थितिका कारण जित्न सकिरहेका थिएनौं। सायद अफगानिस्तानलाई विश्वकपमा संसारकै अगाडि हराउन पाउनुरहेछ।
ट्वान्टी–२० सुरु हुनुअघि ट्रफी उचाल्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
– खुसी लाग्यो। इट्स ए प्रिभिलेज। आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेर विश्वकप खेल्न पाउँदा त्यसै पनि खुसी थिएँ।
कप्तानको तर्फबाट सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
– सरकारलाई भन्दा पनि धेरै कुरा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई भन्नुछ। क्यानबाट सुरु हुन्छ। सरकारले के गर्ने नगर्ने भन्ने। क्यानको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ अब। जुन तरिकाले चलिरहेको छ। ठीक छैन। म इमान्दारिकपूर्वक भनिरहेको छु यही तरिकाले अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ। केही पनि परिवर्तन भएको छैन। हामीले जुन अपेक्षा राखेका थियौं। त्यो केही भएको छैन। क्रिकेटलाई अघि बढाउन क्यानको भूमिका बढी हुन्छ। व्यवस्थापनले सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। अहिले सरकार आफै क्रिकेटमा केही गर्न चाहिरहेको छ। यो खुसीको कुरा हो। आशा गरौं, यो सकारात्मक वातावरण अघि बढाउन सकौं।
कप्तानले अनुशासन तोडेर क्यानको आलोचना गर्छ भन्छन् नि?
– मैले खाली सही कुरा बोलेको हुँ। यदि कसैले मैले गलत बोलेको भन्छ भने खुसीका साथ ऊसँग बसेर छलफल गर्न तयार छु। मैले खेलाडीको प्रतिनिधित्व गरेर बोलेको छु। त्यतिमात्र होइन क्रिकेटलाई माया गर्ने हिसाबले मैले साँचो कुरामात्र राख्दै आएको छु। देखेको र भोगेको मात्र भनेको हुँ।
क्यानबाट तपाईको चाहना के हो?
– क्यानले गरेको पर्याप्त छैन। क्यान अझ व्यावसायिक रूपले अघि बढोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो। क्यानमा क्रिकेट बुझ्ने भन्दा पनि व्यवस्थापन बुझ्ने मान्छेको खाँचो छ। यति धेरै फ्यान फ्लोइङ छ, समर्थन छ अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जर्सी एक छिनमा बिक्छ। यति धेरै मान्छेले क्रिकेट हेर्नु हुन्छ। क्रिकेट नबुझे पनि टिभीअघि बसेर हेर्नुहुन्छ। नेपाली क्रिकेट ठूलो हुँदैछ। त्यसो हुँदा खेलाडीले पनि खेलमा सुधार गर्दै लानुपर्छ। खेलाडीले भूमिका निर्वाह गर्दै जाँदा व्यवस्थापनको भूमिका झन ठूलो भएर जान्छ।
नेपालले पाएको जितमा कसैको नाम लिन चाहनुहुन्छ?
– सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सागर (पुन) र सुवास (खकुरेल) को ओपनिङ जोडीको आलोचना हुँदै आएको थियो। हङकङविरुद्ध उनीहरूले राम्रो सुरुआत दिलाए। त्यसपछि मेरो र ज्ञानु (ज्ञानेन्द्र मल्ल) को बीचमा साझेदारी भयो। शरदले राम्रो गरे। बलिङमा आएर शक्ति (गौचन) दाइ, वसन्त (रेग्मी), जितेन्द्र (मुखिया), सोमपाल (कामी), सबैले राम्रो खेले। फिल्डिङ एकदमै राम्रो भयो।
छनोट नजिक पुगेर रनरेटमा चुक्दा कस्तो लाग्यो?
– रनरेटकै आधारमा अघि बढ्न पनि धेरै कुरा आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। खेल जित्नुपर्छ, राम्रो रन बनाउनुपर्छ। हामी के होला भनेर हेरिरहेका थिएनौं। आफ्नो काम खेल्ने, जति सक्छौं राम्रो गर्ने भन्ने हो। परिस्थितिले कहिले कस्लाई, कहिले कस्लाई साथ दिन्छ।
तपाईको खुसीको सीमा कति हो?
– म देशका लागि खेल्दा जहिले पनि खुसी हुन्छु। म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु, सायद म क्रिकेट खेल्नकै लागि जन्मेको हुँ। जबसम्म खेल्छु, राम्रो खेल्ने प्रयास गर्छु। यो भन्दिनँ कि २–५ वा १० वर्ष खेल्छु। जहिलेसम्म खेल्छु राम्रो खेल्न कोसिस गर्छु।